यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि एभोकाडो खानुका फाइदाहरु, जानी राखौ
जुलाई 25, 2019 जुलाई 25, 2019 साइन्स इन्फोटेक	6 Comments एभोकाडो, डा. राम बहादुर बोहरा, स्वास्थ्य
हाल नेपालमा एभोकाडोको बोट लगाउने प्रचलन बढ्दै गएको देखिन्छ । एभोकाडो कहाँदेखि आएको थियो भन्ने कुरा जान्न आवश्यक छ । मानव स्वास्थ्यमा एभोकाडोको राम्रो स्थान स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको देखिन थालेको छ । हरेक बस्तुको जानकारी सर्बसाधारणलाई समेत भएमा यसबाट सर्बसाधारणले समेत फाइदा उठाउन सक्ने विश्वास गरिएको छ । एभोकाडो पूएब्बा र मेक्सिकोमा पाइने रूख हो तर अहिले थुप्रै देशहरूमा यसको बोट लगाउने गरेको पाइन्छ ।
एभोकाडोको प्रयोग स्वास्थ्यमा बढी प्रयोग हुन थालेदेखि मानिसको ध्यान यसतर्फ गएको धेरैको मत छ । यदि तपाईं मोटोपना कम गर्न चाहनु भएको छ भने वा छालालाई राम्रो बनाउन चाहना भएमा वा क्यान्सर, मधुमेह र हृदय रोगबाट आफुलाई बचाउन छ भने अबदेखि एभोकाडो खाने गर्नुहोस् ।
एभोकाडोमा धेरै मात्रामा हाई-फैटी एसिड हुन्छ । एभोकाडोमा कोलेस्ट्रोलको स्तर कम हुने हुनाले मुटुका रोगीलाई समेत वेफाइदा नगर्ने देखिएको छ । एभोकाडो काचै खान मिल्ने फल अन्तर्गत पर्दछ । एभोकाडोमा फैटी एसिडको राम्रो स्रोत हो भने यसमा शुगर कम पाइन्छ ।
एभोकाडोमा कैल्शियम, आइरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तांबो, मैंगनीज, फॉस्फोरस र जस्ता बढी पाइन्छ । स्वास्थ्यलाई फाइदा हुने खालका फलफूल आफ्नो बारीमा रोपेर फाइदा लिन नभुलौ भन्ने हाम्रो राय छ ।
एभोकाडोका अन्य फाइदाहरु यस्ता छन्
१. एभोकाडोमा धेरै फाइबर हुने हुनाले कब्जियत हटाउन ठुलो मद्दत गर्दछ ।
२. पेट सफा हुनुको साथै सास गनाउने समस्या समेत यसले फाइदा गर्दछ ।
३. एभोकाडोको नियमित सेवन गर्नाले मानिसको छाला नरम हुनुको साथै सुन्दर प्रदान गर्दछ ।
४. लिभरको रोगमा समेत यो औषधि उपयोगी छ । हेपाटाइटिसको कारणबाट लिभरमा भएको असरलाई समेत हटाउने काम गर्दछ ।
५. आँखाको रोगमा समेत उपयोगी छ । यसको प्रयोगले मोतियाविन्दुलाई समेतलाई फाइदा गर्दछ ।
← औषधीको रुपमा वंशलोचनको प्रयोग
स्वास्थ्यको लागि चिप्ले किरा खानुका फाइदाहरु →
6 thoughts on “स्वास्थ्यको लागि एभोकाडो खानुका फाइदाहरु”
Pingback:यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि चिप्ले किरा खानुका फाइदाहरु, जानी राखौ